Ezomnotho Zamageyimu wamahhala weselula | Martech Zone
Ezomnotho Zamageyimu Wamahhala Weselula
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 21, i-2012 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 21, i-2012 U-Adam Encane
Izinkampani zibheke ekwakheni izindawo zokufaka izinhlelo kanye nezinhlelo zokusebenza zeselula ezincoma insizakalo yazo; noma kunjalo, izinhlelo zokusebenza zokuzijabulisa zamahhala zivame ukunganakwa njengenye indlela esebenzayo.
Imodeli yebhizinisi le-freemium iyaqhubeka - imali elinganiselwa ku-65% yemali etholwe yizinhlelo zokusebenza ezingama-100 eziphezulu kakhulu ku-App Store, futhi imali elinganiselwa ku-72% yemali engenayo ye-App Store ivela kumageyimu weselula we-freemium. Ukuthengwa ngaphakathi kwegeyimu okufana nezimpilo ezingeziwe, amandla akhethekile, izimpahla ezibonakalayo nokwenza okomuntu siqu kungenisa imali. Kusuka ku- I-Elastic
Hlobo luni lomdlalo inkampani yakho engayithuthukisa engajabulisa futhi ibandakanye abasebenzisi beselula, ngenkathi ikuvumela ukuthi uxhumane nabo ngempumelelo mayelana nemikhiqizo noma izinsiza zakho?
I-Anatomy Yokumaketha Okuqukethwe
Izindlela ezingama-22 zokwakha okuqukethwe okuphoqayo